25 / 09 / 2019 - RayHaber
[14 / 10 / 2019] EGO ဘတ်စ်ကားများသည်ဆောင်းရာသီအတွက်သင့်တော်သည်	06 တူရကီ
နေ့: စက်တင်ဘာလ 25 2019
Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မကြာသေးမီလများအတွင်းဟန်-Seyitgazi ခြင်းဖြင့်အစပျိုးလေ့လာမှုများအကြား 30 ကီလိုမီတာကွန်ကရစ်လမ်း, ဆောက်လုပ်ရေးပြီးစီးခဲ့သည်။ လမ်းဖြင့်ရပ်ကွက်အတွင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်နိုင်ငံသားများနှင့်အတူအထွတ်အထိပ် Seyitgazi မြို့တော်ဝန် Ugur မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအရာရှိနေ့၌ပြီးစီးခဲ့အလုပ် [ပို ... ]
Grand Prix ပြိုင်ပွဲ Salcano Kayseri Erciyes နှင့် Sakarya ၏ခရီးစဉ်, ရေးအဖွဲ့ချန်ပီယံ
Kayseri အတွက် 20-22 စက်တင်ဘာလ Kayseri Erciyes ၏ခရီးစဉ်အတွင်းပါဝင်သည့် Grand Prix တည်ခင်းဧည်နှင့်ပြိုင်ပွဲ Salcano Sakarya တဲ့ Metropolitan စက်ဘီးအဖွဲ့သည့်ချန်ပီယံအသင်းရပ်တည်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလအကြား Salcano Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စက်ဘီးအဖွဲ့, 20-22 [ပို ... ]
HT19 Metrobus လေ့လာရေးခရီး Start ကို!
HT19 IU သည်Cerrahpaşa - ရီပတ်ဘလီကန်ခရိုင် Metrobus လိုင်းအချိန်အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါİETTကနေကြေငြာချက်ကလည်း, HT19 IU သည်Cerrahpaşa - Cumhuriyet Mah ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Metrobus လိုင်းရက်စွဲ 25.09.2019 ၏အဖြစ်အစေခံရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်းများ, Elm ကျေးရွာလမ်းမကြီး - Alkent - [ပို ... ]
Halkalı-Kapıkul Rapid မီးရထားလိုင်းစီမံကိန်း Çerkezköy-Kapıkul၏အခြေခံဖြတ်တောက်ခြင်း Edirne တှငျကငျြးပခဲ့တဲ့အခမ်းအနား၌ထားခဲ့ပါတယ်။ "ဟာ Elm သမိုင်းဝင်ရထားဘူတာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan မှာကျင်းပမယ့်အခမ်းအနားမှာစကားပြောသောHalkalı-Kapıkul Rapid မီးရထားလိုင်းစီမံကိန်းပထဝီအနေအထားအရတူရကီရဲ့အီးယူ် [ပို ... ]
တံတားများကြောင့် TEM လေ့လာမှုပြိုကျမှအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်
Şekerpınarလမ်းဖြတ်သန်းခနှစ်ဦးစလုံးလမ်းညွန်အတွက် 26 လမ်းသွားအကြားကျဉ်းလိမ့်မည် - ကုန်ထုတ်ဖို့ TEM အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတံတား၌ပြစ်မှားမိစေမည်အကြောင်း, Orhanlıစက်တင်ဘာလ 1 ကြာသပတေးနေ့ကတည်းကကြောင့်။ အရေးပေါ်လမ်းသွား အသုံးပြု. အသွားအလာစီးဆင်းမှုကိုထပ်သုံးလမ်းကြောင်းကနေထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, [ပို ... ]
Nazilli လမ်းသွားလမ်းလာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆိုပါစက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကားတူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး3၏တင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်း။ ယ်ယူခြင်း၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်ရေးဌာန (TCDD) 2019 / 411412 2.162.200,02 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးနှင့်တစ်ဦးလျှင်ကုန်ကျစရိတ် [ပို ... ]
ယခု Fine Arts ၏ Trakya တက္ကသိုလ်ဌာနအဖြစ်အသုံးပြုဝန်ကြီး Turhan, ဟောင်း elm ရထားဘူတာ "မှာကျင်းပHalkalıအဆိုပါသဲအခမ်းအနားတွင်သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ-Kapıkulမီးရထားလိုင်းစီမံကိန်း, တူရကီအဖြစ်သုံးတိုက်ကြီးချိတ်ဆက်အလွန်အရေးကြီးသောပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့် geostrategic [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားနှင့်ရုရှားမီးရထား RZD ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးစေခြင်းငှါ
ရုရှားမီးရထား (RZD) နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အပါအဝင် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သော, TÜDEMSAŞလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ Mahmut Demir, သမ္မတနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပနဲ့သူ့အဖွဲ့ Oleg Belozerov သွားရောက်ခဲ့သည်။ လူမှုရေးမီဒီယာကနေတဆင့်သတင်းအချက်အလက်ပေး TCDD [ပို ... ]
Karaman ဘတ်စ်ကား Stop အတွက်လန်းဆန်း
Karaman Karaman မြူနီစီပယ်အတွက်နေရာလိုအသစ်ကဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ဒေသများ, ယခင်ဘူတာရုံပိုမိုခေတ်မီနှင့်အတူပြောင်းလဲနေတဲ့ရပ်လိုက်နိုင်သည်။ Karaman မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုမိုအဆင်ပြေလမ်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်နိုင်ငံသားများအဘို့ကြီးသော, မြို့များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီမပြတ်မတောက်အလုပ်ဆက်လက် [ပို ... ]
2016 ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစက်ဘီးအသုံးပြုမှု၏ထိရောက်မှုကိုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲငင်တစ်ဖန် "ကျောင်းကလေးတွေစက်ဘီးစီးလာ" ကတည်းက Bilecik မြူနီစီပယ်, တူရကီကျန်းမာရေးမြို့ကြီးများအစည်းအရုံးနှင့် Bicyclists အစည်းအရုံး Bilecik ကိုယ်စားလှယ်ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဥရောပနေ့ကျောင်းအားကစား (ဥရောပ [ပို ... ]
ဒါကြောင့်အသစ်တခုကိုကြည့်ရှိပါတယ်Çankayaမြူနီစီပယ်၏မြူနီစီပယ်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူပြီးစီးခဲ့ Sakarya လမ်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်၏လခြမ်းနီ၏အကြီးဆုံးလူကူးလမ်းအဖြစ်လူသိများ။ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်အပြည့်အဝ Thessaloniki သဘာဝတရား၏မြို့ပြဧရိယာ၏မှတ်ချက်နှင့်ညုဆက်လက် [ပို ... ]
ရုရှားမီးရထား: ကျနော်တို့တွေ့မြင် TCDD နှင့်အတူပူးတွဲစီမံကိန်းများအတွက် 'တစ်ခုကအရေးကြီးအလားအလာ;
ပူးတွဲစီမံကိန်းများသဘောပေါက်ရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူတူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာရုရှားမီးရထား (RJD), သူတို့ကသိသိသာသာအလားအလာတွေ့မြင်ကဆိုသည်။ အဆိုပါ RJD ကနေကြေငြာချက်, ကုမ္ပဏီ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာနှင့် CEO ဖြစ်သူ Oleg Belozyorov အဆိုအရ [ပို ... ]
စီမံကိန်းတူရကီနှင့် Sivas အကြား Download နာရီပြင်ပေးဖို့နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် 2
တူရကီ-Sivas 12 နာရီတူရကီ-Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုထောက်ပံ့ခဲ့သည်အတွက်နာရီ294,74 ရာခိုင်နှုန်းကြားခရီးသွားအချိန်လျှော့ချရန်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးတစ်ဦးကကြေညာချက် Cahit Turhan, အာရှမိုင်းနားမှတဆင့် Silk Road ပြောပါတယ် [ပို ... ]
Manisa အတွက်ဂျာမန်ကုမ္ပဏီကြီး Volkswagen ရဲ့အသစ်ကစက်ရုံတူရကီအချို့အစိတ်အပိုင်းများရထားလမ်းအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်လာသောအခါ, အရေးပါတဲ့လေ့လာမှုကိုပိုမိုထင်ရှားဤပြဿနာအားအသစ်သောစကားသံကိုငါသက်ရောက်စေမည်သတ်မှတ်ထားသောတည်စေမည်။ တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုဝန်ကြီးအဖြစ် (TÜLOMSAŞ) [ပို ... ]
Varsak-ဇာတ်စင်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်3အတွက်ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။ ဇာတ်စင်ရထားစနစ်စီမံကိန်းအပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူဆက်လက်။ ပြီးစီးခဲ့တူးဖော်အလုပ် Sakarya Boulevard Interchange ထောက်ခံမှုအတွက်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံအောက်ရှိနောက်ဆုံးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, စနစ်ရဲ့သာမြေအောက်မှတ်တိုင်အနောက်ရထားဘူတာဖြစ်ပါတယ် [ပို ... ]
တရုတ်စတင်အဆိုပါ Metro Scanning ကိုစနစ်ကြေးငွေပေးချေကာလအတွက်ရငျဆိုငျရ
မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု system ကိုအလေ့အကျင့်သို့အသစ်တခုမျက်နှာထားရာပူဇော်သက္ကာကို၎င်း၏မြေအောက်စက်ရုံသုံးစွဲဖို့တရုတ်အတွက်ခရီးသွားများ၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်။ သူတို့မျက်နှာစကင်ဖတ်ဖို့အားဖြင့် system ကိုတက်သည်လက်မှတ်ထိုးလဲလှယ်အတွက်ရှန်ကျန်းအတွက် 60 အသက်ကျော်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကတီထွင်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးကို Tencent နည်းပညာ [ပို ... ]
သူသည် Marmaray Project မှတရာနှစ်စီမံကိန်းကိုဖော်ပြထား9ပြင်းထန်မှု၏ငလျင်လှုပ်ကိုဆီးတားတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်, ကျွန်း၏အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ Marmara ပင်လယ်ပြင်၏အရှေ့ဘက်တိုးချဲ့အကြောင်းကို 20 ကီလိုမီတာမြောက်ကိုရီးယား Anatolian ပြတ်ရွေ့ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းဧရိယာ, [ပို ... ]
Kocaeli စီးတီးကဒ်အတွက်တထောင်အသစ်သောကျောင်းသားများကို 22 မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏
အသစ်ကပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျှော့စျေး Kocaeli စီးတီးကတ်များ၏နယ်နိမိတ်အတွင်းကျောင်းသားများအားပေးခဲ့သည်ရဲ့ start နှင့်အတူ 2019-2020-ပညာရေးကျောင်းသားများကို။ အသစ်ကပညာသင်နှစ်ကိုအပ်ထားပြီးမတိုင်မီစက်တင်ဘာလ 22 အတွက်စုစုပေါင်းကတ်များတထောင်ကျောင်းသားများကိုအလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ 4-2019 ကနေရုံးဖြန့်ဖြူး 2020 [ပို ... ]
Halkalı Kapıkuleမြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း ''Çerkezköy'' Kat ငမှ Added Value ကို ''
Çerkezköy မြို့တော်ဝန် Vahap akai, မွို့၌ရပ်ရွာသူကြီးများအား 10 အလုပ်လုပ်နေ့လယ်စာအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုနှင့်ရပ်ရွာသူကြီးများမှနားထောင်ခဲ့တယ်။ Çerkezköy အဆိုပါအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များကိုလည်းသမ္မတ akai ဝေမျှ Halkalı quick Kapıkule [ပို ... ]
မီးရထားအဆင့် Crossing မတော်တဆမှုကနေယိုစိမ့်ဖြစ်ပျက်စေ
Diyarbakırဌာနခွဲကသမ္မတ Nusret Basmacıအဆိုပါယိုစိမ့်လစဉ်လတိုင်းအဆင့်ကိုကူးမီးရထားပျက်ကျမှုကနေအစပြုသည်ဟုဖော်ပြထားသည်, BTS, သူအာဏာပိုင်များတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအစီအမံယူသင့်တယ်ဟုပြောသည်။ ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (BTS) Diyarbakırဌာနခွဲကသမ္မတ Nusret Basmacı, Batman [ပို ... ]
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (237) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)